Ayaa ka faa'iidaysan kara joojinta shaqada ee la xiriirta xiritaanka iskuulada? Haddii aad xaq u leedahay, waa immisa iyo muddada magdhowgu?
Posted by Tranquillus | Mar 21, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Xaqiiqdii waad isweydiineysaa su'aalo badan hada. Haddii ay tahay inaan carruurtayda ku hayo guriga iyo shaqada khadka tooska ah suurtagal iguma ahan. Maxay yihiin farsamooyinka ay dowladdu u diyaarisay xaaladahaas oo dhan?
Talo ma siin kartid mana daryeeli kartid cunug ka yar 16 sano.
Dawladdu waxay dejisay qaab gaar ah oo leh caymiska jirada oo ku saleysan joojinta shaqada. Ilmahaaga waxaa daruuri u ah cabiraadaha cabbirista hadda jira.
Waxaad xaq u leedahay fasaxan bukaanka ee aan caadiga ahayn iyo gunnooyinka maalinlaha ah ee la socda.
Haddii ilmahaagu ka yar yahay 16:
- Inaanay suurtagal ahayn inaad ka shaqeysid meel fog waa inaad sidaas darteed waajib kugu tahay inaad joojiso waxqabad kasta oo aad ku ilaalinayso carruurtaada.
- In ilmahaagu aad uga yar yahay 16 sano maalinta loo qoray joogsiga.
Haddii ilmahaagu yahay 16 jir ama ka weyn yahay, xaq uma lihid wax magdhaw ah. Marka laga reebo carruurta ka yar 18 sano, naafada ah, wax ku bartay machadyo gaar ah wakhtiyo caadi ah.
Muddo intee le'eg ayay shaqadani joojineysaa?
Fasaxa jirada ee lagu siin doono waxaa laga yaabaa inuu kordho ilaa 14 maalmood. Taasi waa in la yiraahdo waa inaad tirisaa 14 maalmood oo ay ku jiraan dhamaadka usbuuca laga soo qoro fasaxa jirada. Baaq cusub waa in la sameeyaa 14kii maalmoodba mar ilaa uu ka dhammaanayo muddada ku xirnaanshaha. Labada waalid midkood ayaa ka faa'iideysan kara qalabkan. Si kastaba ha noqotee waa suurtagal in la wadaago aabaha iyo hooyada iyo sidoo kale si kadis ah in loo kala qaado.
READ Waa maxay cashuur-hayntu?
Maxay yihiin tillaabooyinka la qaadayo?
Shaqaale ahaan, ma lihid talaabooyin aad qaadi karto oo aan ahayn tan ogeysiinta loo-shaqeeyahaaga. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu u diri doonaa dhammaan macluumaadka loo baahan yahay CPAM. Xaqiiqdii waa su'aal tilmaamaysa inaadan awoodin inaad wicitaan samayso, adigu guriga lagu dayactiro. Shaqaalaha nidaamka guud ayaa lagu soo daray habkan. Nidaamkan ma khuseeyo saraakiisha dawladda iyo dadka ku tiirsan qorshayaasha kale ee gaarka ah. Dadka iskood u shaqeysta ayaa daryeela sameynta cadeynta caymiska caafimaadka.
Goormaad aruurineysaa gunnooyinkaaga?
Laga bilaabo wakhtiga loo-shaqeeyahaagu ku fuliyo habraaca goobta lagu bixiyay ujeedokan. Waxaad xaq u yeelan doontaa gunnooyinka maalinlaha ah, oo ay ku xiran tahay jeegareynta caymiska caafimaadka. Runtii, xubnaha mushaharkaaga waa in loo gudbiyo si waafaqsan nidaamka caadiga ah. Waqtiga macluumaadkan la soo uruurinayo oo laga baaraandegi karo ayaa laga yaabaa inuu sii dheeraado ama gaabiyo iyada oo kuxiran xaaladda gobolkaaga. Qodob xiisa leh oo la xasuusto, waxaa lagu siin doonaa lacagta maalmaha aad fasaxa tahay. Iyadoo aan lahayn maalmo la'aan iyo baaritaan la'aan la xiriirta furitaanka xuquuqahaaga.
Tusaale Boosta Imaatinka daryeelka ilmaha ee guriga.
Waa tan a tusaale rasmi ah, fudud, shahaado in aad ugu dirto loo-shaqeeyahaaga boostada ama by email. Haddii aad rabto, waxaad u soo diri kartaa iyadoo la raacayo rasiidka adiga oo isticmaalaya adeegyada khadka tooska ah xafiiska boostada.
Aniga oo rajaynaya, waxaan rajaynayaa in dhakhso dhakhso leh loogu celiyo shaqadayda, waan xirayaa, sida la isku raacay, shahaadada daryeelka ilmaha.
READ Baro sida loo hubiyo khadkaaga lacagta
Goor dhaw baan ku arki doonaa
Magaca koowaad NAME
Imaatinka daryeelka ilmaha ee guriga
Aniga, calaamada hoos ku xusan "Magaca hore Magaca dambe ee shaqaalaha", waxaan cadeynayaa in cunugeyga "Magaca hore Magaca cunugga", da 'da'da cunugga "sanadaha la diiwaan geliyey aasaaska" Magaca aasaaska "ee commune "Magaca kombuyuutarka", oo xirnaa muddo "taariikhda" illaa "taariikh" iyada oo qayb ka ah maareynta faafitaanka cudurka coronavirus.
Waxaan cadeynayaa inaan ahay waalidka kaliya ee codsada joojinta shaqada si aan cunugeyga ugu hayo guriga.
Lagu sameeyay "goobta" taariikhda "taariikhda"
"Magaca koowaad Magaca dambe ee shaqaalaha"
Ayaa ka faa'iidaysan kara joojinta shaqada ee la xiriirta xiritaanka iskuulada? Haddii aad xaq u leedahay, waa immisa iyo muddada magdhowgu? Nofeembar 22nd, 2020Tranquillus
horeU diyaari farriinta maqnaanshaha tooska ah ee Fasaxyada
socdaCoronavirus iyo waxqabadka qayb ahaan, 84% mushaharkaaga saafiga ah ayaa lagu siin doonaa adiga.
Tababbarka Xirfadeed ee Xirfad La'aanta
Waa maxay sababta ay u shaqeyneyso Faransiiska?